Carl Geelle Real Estate Blog
Horumarinta Guryeynta UK waa Fursad Maalgashi Sameeya
Xukuumadda Ingiriiska ayaa xooga saartay inay dhiirrigeliso horumarinta guryaha si ay u xalliso khasaare weyn oo ku yimid bartilmaameedyada sannadlaha ah, waxay hadda ku dhawaaqeen lacag lacageed oo 7 Milyan ah oo loo qoondeeyay horumarinta guryaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Tani waa fursado hal mar ah oo loogu talagalay shirkadaha guryaha iyo maalgashadayaasha JV.
Maxay Sababta 100,000 ugu dhicid horumarinta guriyeynta?
Muddo sanado ah tirada dadka soo galaya warshadaha dhismaha ayaa hoos u dhacay, gaar ahaan xirfadlayaasha, sidaa daraadeed xirfadaha daruuriga ah lama heli karo degaanka.
Dhismaha qalabka yaraanta
'Lebbaal' oo liita waa mid gaaban, dhismaha dhismuhu waa wax xulasho ah, waana wax aan fiicneyn walxaha kuleylka ugu fiican!
Baanka-Dhismaha guryaha dhismayaasha waaweyn
Waxaa si weyn loo diidey oo ay daraasad ay sameysay Hay'adda Nabadgelyada Guriyeynta waxay isku dayday inay cadeyso in tani aysan ahayn arrin, laakiin waxay weli tahay xaqiiqo ah in dhismayaasha ugu wayn ee guryaha leh ay leeyihiin dhul ballaaran oo aan horumarineed lahayn. Maamulku wuxuu leeyahay waajibaad ah inuu kasbado faa'iidada ugu weyn ee suurtogalka ah ee laga helo mulkiilaha dhulkooda kaas oo xaddidaya fursadaha.
Hawlaha oggolaanshaha qorshaynta ah ee yar
Dhismayaasha guryaha ee waaweyn ayaa sheegaya in tani ay sabab u tahay in aysan kobcin karin dhul badan oo ay haystaan, laakiin dhibaatadu waxay ka imanaysaa xaqiiqda ah in horumarintu ay yihiin kuwo aad u ballaadhan oo ay adag tahay in ay si buuxda u beddelaan muuqaalka guud iyo dhaqaalaha guryaha.
Waxaan leenahay jawaabaha!
Fadlan nala soo xiriir: Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view. wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku